Abenzi bemveliso kunye nabathengisi - China Umkhosi wothotho lomzi mveliso
Yangaphandle efihliweyo Bag Water
Ukuzifihla kwamadoda, ukubonakala kwesitayile, imisebenzi enamandla. Izinto ezikumgangatho ophezulu ezinobungakanani bendalo, amandla kunye nobude bepayipi zinokwenziwa ngemeko. Umzimba wengxowa uyanxiba kwaye awonakaliseki lula. Ikuvumela ukuba uzalise ngokukhawuleza imithombo yamanzi.
I-BPA yasimahla yokuHanjiswa kweBladder Army Green
Umkhosi oluhlaza ingxowa yamanzi ezemidlalo aluhlaza, uyilo oluncinci lokuvula. High-frequency technology yoshicilelo, iipateni-ntathu. Ngokucwangcisiweyo yenzelwe ukutsala umlomo nothuli uthuli. Ukuzisa nje olona luvo lubalaseleyo. Thatha uhambo lwangaphandle.
Camping Ukunyuka intaba Running isinye Nge Tube
Ingxowa yamanzi ekumgangatho ophezulu evulekileyo enkulu. Sebenzisa ifilimu ephezulu yokusingqongileyo kunye nezixhobo ezivela kwi-brand eyaziwayo ye-SBS. Sebenzisa itekhnoloji yokushicilela kwescreen, ukuprinta kucacile kwaye akukho lula ukuphelelwa ngamandla. Imveliso inika ingqalelo kwiinkcukacha kuyo yonke indawo, ukukuzisela olona lawulo lubalaseleyo.
Ugcino lwamanzi ukuGcina intaba Ukuhamba ngeenyawo ngebhayisikile
Uyilo olwahlukileyo lweorenji kunye nomkhosi oluhlaza luzele ngengqondo yefashoni. Uyilo lwesigqubuthelo sethuli sompu wokutsala kunye noyilo lweqweqwe lokutsala ityhubhu konke kubonisa uyilo oluneenkcukacha lwale ngxowa yamanzi. Ayisiyimbonakalo nje enomtsalane kodwa ikwanakho nokusebenziseka okuqinileyo.
Umgangatho oLungileyo weMidlalo yangaphandle yeMidlalo yeBladder Backpack
Ibhegi yobhaka wamanzi ongaphandle ethatha ubumnandi kunye nokusebenza ngokugqithileyo. Ayinamsebenzi ukuba usela amanzi, ugcwalisa amanzi, okanye ucoca ibhegi yamanzi. Yonke imisebenzi inokwenziwa ngokuthe ngqo ngaphandle kokuthatha ibhegi yamanzi ebhegini. Kwenu abaleka ixesha kwezemidlalo, uya kuba ngoyena mncedisi ubalaseleyo.
Inombolo Umba: WBB-004
Igama lemveliso: Ubhaka wesinye ubhaka
Isixhobo: I-Oxford EVA
Ukusetyenziswa: Ukunyuka intaba / Ukukhempisha / Ukuhamba
Ezangaphandle Sport Hydration Bladder Army Green ubhaka
Umkhosi wobhaka we-hydration ongaphandle. Yenziwe ngezinto ezinobunzima be-EVA, ayizukubangela umthwalo owongezelelweyo. Ikuvumela ukuba uzalise ngokukhawuleza amanzi ngexesha lokuzilolonga. Imveliso isondelelene kwaye iyaphefumla ngaphandle kokungcangcazela, kwaye iyahambelana noyilo lwe-ergonomic.